I-Side Piece Cottage- Ikhaya lakho liya kuba nomona
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAriana
Indawo epholileyo yokugoba emva kosuku elunxwemeni, edolophini, okanye undwendwele abantu obathandayo. Igumbi lokulala eli-2 elinekhitshi eligcwele ngokupheleleyo, ebiyelwe ngasemva kweyadi, kunye nentaphane yevintage. Ifakwe kwimizuzu eli-10 ukusuka edolophini kunye nemizuzu engama-20-25 ukusuka eWrightsville okanye eCarolina Beach. Hamba uye eGreenfield Lake Amphitheatre okanye uthathe uhambo olufutshane ukuya eCastle Street kunye nezinto zakudala, ikofu, kunye nobugcisa. Indawo egqibeleleyo yokuphumla kwezothando okanye abahlobo bedibana. Uya kuziva usekhaya kangangokuba awufuni ukuhamba.
Ndithatha amalungiselelo okulala kakhulu. Ukuba ujonge oomatrasi obutofotofo, amashiti adilikayo, imiqamelo efukufuku, kunye neelinen ezitofotofo uya kuyithanda iSide Piece. Isilumkiso-unokuba nobunzima bokuphuma ebhedini!
Sikwazama ukugcina yonke into i-eco-friendly kangangoko sinako--ngaphandle kweKeurig (iplanethi elusizi!). Zonke izinto zethu zokucoca kunye neemveliso zomzimba zilungele umhlaba ukuya kuthi ga kwiibrashi zethu zamazinyo ezisecaleni ze-bamboo. I-Shampoo, i-Conditioner, i-Body Wash kunye ne-Lotion yimveliso ye-Puracy kwiibhotile ezinokusetyenziswa kwakhona. Iilinen zethu zenziwe ngeEucalyptus kunye neHemp.
Indawo ephezulu kunye neza kufutshane kakhulu neGreenfield Lake Park kunye neAmphitheatre. Imizuzu eyi-10 ukuya edolophini. 20-25 imizuzu yokuqhuba ukuya kumalwandle asekuhlaleni. Hamba uye kweyona bhega ibalaseleyo edolophini eWinnie's tavern.
Umbuki zindwendwe ngu- Ariana
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wilmington